အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX 1 months ago7တစ်နှစ် #1314
မင်္ဂလာပါ Rikooo simmers!
ငါအကောင်းတစ်ဦး 15 yrs များအတွက် simming ပါပြီနှင့်ဤဘယ်နေရာမှာမဆိုအကောင်းဆုံးကိုအခမဲ့အထုပ်ဖြစ်ရမည်! ဒါပေမယ့် .......
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာ simming တှငျငါအတော်လေး proficent ဖြစ်ကြောင်းကိုထင်လိုပေမယ့်ကျွန်မ aghhh လုပ်ကိုင်ဖို့ကဒီအထုပ်မရနိုငျပါသညျ!
ငါအတူတူဒီအထုပ်ထားသောယောက်ျားတွေကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဒီအပေါ်အေး & အမှောင်ငါ့ကိုတကယ် foxed တယ်ပြီ, ငါအရာရာကြိုးစားခဲ့ပါတယ်, FSX-SP2 installed ပေမယ့်တိုင်း gauge, panel က, ခလုတ်ကို completly အသေဖြစ်၏, ctrl + အရာအားလုံးငဖြစ်ပါသည် ..... ဒီအထုပ်၏ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးပြင်ဆင်ချက်ပြုပါက၎င်း၏အေး & အမှောင်ဘဲ, ငါကလူတစ်ဦးတွေအများကြီးသတိပြုမိကြပါပြီကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်အောင် တူညီသောပြဿနာရှိသည်, ငါ့အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်ကာလအစဉ်အမြဲပစ္စုပ္ပန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ပါလိမ့်မယ်! (ps အဘယ်သူမျှမကံကောင်းပါစေနှင့်အတူ3ကြိမ် installed ပါပြီ)
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX 1 months ago7တစ်နှစ် #1329
နည်းနည်းဒီဖိုရမ်ကိုမအကူအညီနဲ့လည်းမရှိ disapointed :(
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX 1 months ago7တစ်နှစ် #1333
သင်သည်ထိုဗူးများ၏ download စာမျက်နှာတွင်မှာဖော်ပြထားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့ရှိသည်။
ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဤလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဘာလုပ်ရမှန်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ် အကယ်. ကြောင့်အလုပ်မလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်မဖော်ပြခဲ့ပါဘူး FSX တစ်ဦးမဖြစ်မနေင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်, installed SP2 ။ အရာတစ်ဦးကအများကြီးရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်စရာမလိုဘဲအလုပ် wont ။ ဒါ့အပြင်သူကမှန်မှန်ကန်ကန်မတပ်ဆင်ရသေးရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတွေအများအပြားကအကြောင်းဝေဖန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာလိုအပ်သော steps.Also လွဲချော်ပါကသင်၏အကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် FSX ကျိုးပဲ့, ဒါကြောင့်စစ်ဆေးသည်။
ဒါကြောင့်သင်လုပ်ချင်တဲ့လေဆိပ်ထား, သင်ချင်သောလေယာဉ်ကိုရှေးခယျြ, အက default ပျံသန်းဖန်တီးပါ။ အရာအားလုံးကို turn off, ငါအရာအားလုံးကိုဆိုလို, default အဖြစ်ပြုလုပ်သိမ်းဆည်းပါ။ ယခုမှသွားပါ FSX cfg file.I ခင်ဗျားရဲ့ PC မှာဘယ် OS ရှိလဲမသိဘူး၊ အဓိကအပိုင်းတွင်လိုအပ်သောမျဉ်းကိုထည့်ပါ၊ ၎င်းကိုသိမ်းပါ။
ထက်, သင့်ကိုစတင်ရန် FSX ထပ်ကြိုးစားပါ။
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX 1 months ago7တစ်နှစ် #1335
A320 pack သည်အထူးသဖြင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ယခုတွင် Honeywell FMC ပါ ၀ င်သည်။ ငါအရမ်းမကြာခဏပျံသန်းသည် FPS တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်လေ့လာမှုအဆင့်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်စတင်သည့်ပစ္စည်းများ၊ လောင်စာဆီပန့်များစသည့်သင့်လျော်သောပစ္စည်းများကိုပေးနိုင်သည်။
ငါသည်ဤအထုပ်ကွန်ပျူတာများ၏ပြောင်းလဲမှုနှင့်ထံမှထို့နောက်တစ်ဦးအဆင့်မြှင့်မှုကြောင့်သုံး (3) ကြိမ် installed ပါပြီ FSX သို့ P3D ငါမဆိုပြissuesနာများဖူးဘူး။ မင်းရဲ့အဆုံးမှာတစ်ခုခုမှားနေရမလား။
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX 1 months ago6တစ်နှစ် #1343
လူအပေါင်းတို့သည်အကူအညီတောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါနောက်ဆုံးတော့ကြောင့် yeeeeaaah အလုပ်လုပ်တယ်
ငါ DirectX 10 ဒါနဲ့ DirectX 12 ကပြောင်းလဲသွားပြီကြောင့်ပြတင်းပေါက် 10 သုံးပါနဲ့အရာအားလုံးကိုယခုအလုပ်လုပ်ပုံရသည်
ဆိတ်ကွယ်ရာအညွှန်းအလင်းအိမ်, မည်သည့်စိတ်ကူးများမည်သူမဆိုထံမှ? ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပြင်ဆင်ချက်ပြဿနာများရှိသည်သောသူကိုအခြားသူများအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX 1 months ago5တစ်နှစ် #1365
ဒီရေယာဉ်စုအားလုံးမှာ No2အင်ဂျင်ကိုဘာကြောင့်အမြဲတမ်းစလုပ်ဖို့အခက်တွေ့နေရတာလဲ။ ငါသုံးတယ် FSX ရေနွေးငွေ့ဗားရှင်း
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX 1 months ago5တစ်နှစ် #1366
သင် "အင်ဂျင် 1" start တစ်ချိန်ကသင် "အင်ဂျင်" ဖို့ "သွေးထွက်" အကူးအပြောင်းကြောင်းကိုသေချာပါစေ .... ထို့နောက် "အင်ဂျင် 2" ပစ်ခတ်
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX 1 months ago4တစ်နှစ် #1378
အခါတိုင်းငါအင်ဂျင်ကို turn off လေယာဉ်ကိုစတင်ချင်ပါတယ်။ ထိုအခါငါကသူတို့ကိုပြန်လည်စတင်ရန်ရှိသည်။
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX7လအတွင်း4weeks ago #1567
ကောင်းသောနေ့မျှော်လင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအထုပ်ကိုထည့်သွင်းပြီးအလွန်ပျော်မွေ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ပြissueနာတစ်ခုသာရှိသည်။ လက်စွဲစာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းစတင်လုပ်ကိုင်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုတစ်ဆင့်ချင်းလိုက်လျှောက်ပြီးနောက်အားလုံးအဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် V2 ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကအင်ဂျင်အားလုံးသည်ပိတ်ပြီးနောက်အခမဲ့လေယာဉ်ပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်ထပ်တူအရာအားလုံးကိုပြန်လုပ်ပါ၊ ပြနာ။ အရာအားလုံးကိုငါရိုက်ကူးရတာဝမ်းသာစရာပေ
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX7လအတွင်း4weeks ago #1568
၎င်းကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပြီးဘာအမှားများမှရှောင်ရှားရန်သင်၏ sim တွင်မည်သည့်အရာများပြောင်းလဲရမည်ကိုဖော်ပြထားသည်။
အရေးကြီး: Airbus သည် Cold & Dark mode တွင်ပေါ်နေသည် (အင်ဂျင်များနှင့်တူရိယာများပိတ်ထားသည်) ။ FrançoisDoré၏ Bleeds နှင့်အတူစတင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသိရှိရန်ပါ ၀ င်သောအသုံးပြုသူလက်စွဲအပြည့်အစုံကိုဖတ်ပါ။ စာရေးသူသည်ပုံမှန်အားဖြင့်“ NORMAL LAW” ရှိ Fly By Wire mode ဖြင့်အင်ဂျင်များကို CTRL + E ကိုအလိုအလျောက်စတင်ရန်ခွင့်ပြုဆဲဖြစ်သည်။
KNOWN အမှားများ - Overhead panel ကမပြဘူးဆိုရင်သင်လိုအပ်ပါတယ် FSX-SP2 ။ အားလုံးပြားမှာအနည်းဆုံးလိုအပ် FSX-SP2 သို့မဟုတ် FSX-Acceleration သို့မဟုတ် FSX ရေနွေးငွေ့ Edition ကိုသို့မဟုတ် Prepar3D ...
အကယ်၍ သင်၏လေယာဉ်သည်အအေးနှင့်မှောင်မိုက်သောနေရာတွင်မစတင်ပါကသို့မဟုတ်ချွတ်ပြီးနောက်ချက်ချင်းအင်ဂျင်ပိတ်ထားပါကသင်၏ပုံမှန်ပျံသန်းမှုသည်မူလမူလပျံသန်းမှုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ FSXULM နှင့်အတူသောကြာနေ့ဆိပ်ကမ်းတွင်ပျံသန်းသည်။
ပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်သင်လေယာဉ်နှင့်သင်ရွေးချယ်သောလေယာဉ်နှင့်သင်ရွေးချယ်ရမည့်လေယာဉ်ကိုသာဖန်တီးရမည်။ မြင်ကွင်းပေါ်လာသည့်အခါလေယာဉ်၏အင်ဂျင် (အင်ဂျင်၊ ဘက်ထရီ၊ စက်နှိုး) အားလုံးကိုပိတ်ပြီးလေယာဉ်ကိုကယ်တင်ပါ။ "Save flight" ၀ င်းဒိုးတွင် 'this default' ပျံသန်းမှုကိုလုပ်ပါ 'checkbox ကို check လုပ်ပါ။
ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ FSXတည်ရှိသော (ကို Notepad နှင့်အတူ) .CFG:
အကယ်၍ သင်သည် Vista (သို့) Seven (သို့) Windows 10 "C ၌ရှိလျှင် - အသုံးပြုသူများ - သုံးစွဲသူအမည် - အပလီကေးရှင်းဒေတာ - Roaming - Microsoft - FSX"
Windows XP တွင်ရှိလျှင် - C: - စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ချိန်ညှိချက်များ - သုံးစွဲသူအမည် - လျှောက်လွှာအချက်အလက်များ - Microsoft - FSX"
DisablePreload = 1: အ [အဓိက] အပိုင်းမှာတော့မျဉ်း add
ပြန်စတင်သည် FSX, ပြဿနာတညျ့။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: တကယ
0.245 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်